မန်ယူအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်ကျောနံပါတ်(၁၀) ပိုင်ရှင်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်
နံပါတ်(၁၀)၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ မန်ယူဂန္ထ၀င်တွေရဲ့ခြေရာကို ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford လိုက်နင်းနိုင်မလား
6 Aug 2018 . 3:19 PM
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခြေစမ်းပွဲမှာ မန်ယူပရိသတ်တွေ ထူးခြားမှုတစ်ခုကို သတိပြုမိခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ အသင်းရဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် Rashford က ကျောနံပါတ်(၁၀)ကို ၀တ်ဆင်ကစားခဲ့တာပါပဲ။ မန်ယူအသင်းမှာ ဂန္ထ၀င်နံပါတ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကျောနံပါတ်တွေရှိတယ်။ နံပါတ်(၇)လို၊ နံပါတ်(၁၀)လို နံပါတ်တွေပေါ့။ အဲဒီနံပါတ်တွေ ၀င်ဆင်ကစားခွင့်ရဖို့ဆိုတာက ခြေစွမ်းပိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ အသင်းအပေါ် အကျိုးပြုမှု စတဲ့အရည်အချင်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှဖြစ်မှာပါ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ခြေစမ်းပွဲအပြီး မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho က ပြီးခဲ့တဲ့(၂)နှစ်ခွဲကာလအတွင်း ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကြောင့် ဆုပေးတဲ့အနေနဲ့ ကျောနံပါတ်(၁၀)ကို ၀တ်ဆင်ခွင့်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုခဲ့တယ်။
မန်ယူအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ နံပါတ်(၁၀)၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်တွေရှိခဲ့ဖူးတယ်။ မာ့ခ်ဟုခ်ျ Mark Hughes ၊ ဘက်ခမ် Beckham ၊ ရှရင်ဂမ် Sheringham ၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း Ruud van Nistelrooy တို့က စလို့ နောက်ဆုံး ရွန်နီ Rooney အထိပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက အဲဒီနံပါတ်ကို ဆွီဒင်ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူး အီဘရာဟီမိုဗစ် Ibrahimovic ၀တ်ဆင်ခဲ့ပေမယ့် ထင်သလောက် မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ တချို့နံပါတ်တွေက ထူးခြားမှုရှိသလို၊ နတ်ကြီးတယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။
ဥပမာ မန်ယူအသင်းမှာဆိုရင် နံပါတ်(၇)၊ နံပါတ်(၁၀)အင်္ကျီတွေကို တော်ရုံလူ ၀တ်ဆင်ဖို့ဆိုတာ ခက်ပါတယ်။ ဘက်ခမ် Beckham နောက်ပိုင်း စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ၀တ်ဆင်ခဲ့ပြီး နံပါတ်(၇)၀တ်ဆင်ခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ အောင်မြင်မှုအများဆုံး ကစားသမားဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ အသိဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျောနံပါတ်(၇)က ကျိန်စာလိုဖြစ်လာပြီး ဒီနံပါတ်ဝတ်ဆင်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေဟာ ဖိအားဒဏ် မခံနိုင်လို့ အိုးလ်ထရက်ဖို့ဒ်မြေကို စွန့်ခွာခဲ့ရတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဗလင်စီယာ Valencia တစ်ဦးသာ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိလို့ အရင်နံပါတ်ဟောင်း (၂၅)ကို ပြန်ဝတ်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
ကျောနံပါတ်(၁၀)ကျတော့ နံပါတ်(၇)ထက် ဖိအား ပိုနည်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ မာ့ခ်ဟုခ်ျနောက်ပိုင်း ဘလက်ခ်မိုး Balckmore ၀တ်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူး။ ဘက်ခမ် ဆီ ရောက်လာတယ်၊ အောင်မြင်မှုရတယ်။
အဲဒီနောက် ရှရင်ဂမ် Sheringham ၊ နစ္စတယ်ရွိုင်း Nistelrooy ၊ ရွန်နီ Rooney တို့ လက်ထက်အထိ နံပါတ်(၁၀)ပိုင်ရှင်တွေက အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
အခု ကျောနံပါတ်(၁၀)ကို ရပ်ရ်ှဖို့ဒ် ၀တ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။ ရှပ်ရ်ှဖို့ဒ်ဆိုတာကလည်း အသက်(၂၀)သာရှိသေးပေမယ့် နာမည်ကြီးကစားသမားတွေတောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သွင်းဂိုးစံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ရယူထားသူ။၂၀၁၆၊ ဖေဖော်ဝါရီမှာ မစ်ဂျေးလန်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲတုန်းက စီနီယာအသင်းအတွက် ပထမဆုံးပွဲထွက်ကစားခဲ့ပြီး (၂)ဂိုးသွင်းခဲ့လို့ မန်ယူအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသွင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်။
အာဆင်နယ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲမှာလည်း (၂)ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့် မန်ယူအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် တတိယမြောက် အသက်အငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းသူအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ မှတ်တမ်းက မရပ်တန့်ခဲ့ဘူး။ မန်စီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ ဂိုးသွင်းခဲ့တာကြောင့်လည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ခေတ် မန်ချက်စတာဒါဘီမှာ အသက်အငယ်ဆုံး ဂိုးသွင်းတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မော်ရင်ဟိုရဲ့ နေရာမပေးမှုကြောင့် ပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်လာရပေမယ့် ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာ အသင်းအပေါ် အကျိုးပြုနေဆဲပါပဲ။
ဒါကြောင့်ပဲ စစချင်းကစားတုန်းက ကျောနံပါတ် (၃၉)၊ နောက်တော့ (၁၉) အခု နံပါတ်(၁၀)ကို မော်ရင်ဟိုက ယုံယုံကြည်ကြည် ပေးအပ်ခဲ့တာပါ။ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်ရဲ့ ခြေစွမ်းအရလည်း ဒီနံပါတ်နဲ့ ထိုက်တန်သူဆိုတာ ငြင်းစရာမရှိပါဘူး။ လက်ရှိဘောလုံးလောကရဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်တွေထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်နေသူ ရပ်ရ်ှဖို့ဒ်အတွက် သူ့နောင်တော်ကြီးတွေလို အောင်မြင်မှုမျိုးရယူနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:Pantip,Best World News,The Sun,These Football Times,eBid,Mirror,Daily Times Nigeria
နံပါတျ(၁၀)ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ မနျယူဂန်ထဝငျတှရေဲ့ခွရောကို ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford လိုကျနငျးနိုငျမလား
ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ခွစေမျးပှဲမှာ မနျယူပရိသတျတှေ ထူးခွားမှုတဈခုကို သတိပွုမိခဲ့တယျ။ အဲဒါကတော့ အသငျးရဲ့ အင်ျဂလနျလူငယျတိုကျစဈမှူး ရပျရျှဖို့ဒျ Rashford က ကြောနံပါတျ(၁၀)ကို ဝတျဆငျကစားခဲ့တာပါပဲ။ မနျယူအသငျးမှာ ဂန်ထဝငျနံပါတျလို့ သတျမှတျထားတဲ့ ကြောနံပါတျတှရှေိတယျ။ နံပါတျ(၇)လို၊ နံပါတျ(၁၀)လို နံပါတျတှပေေါ့။ အဲဒီနံပါတျတှေ ဝငျဆငျကစားခှငျ့ရဖို့ဆိုတာက ခွစှေမျးပိုငျး၊ စှမျးဆောငျရညျအပိုငျး၊ အသငျးအပျေါ အကြိုးပွုမှု စတဲ့အရညျအခငျြးတှနေဲ့ ကိုကျညီမှဖွဈမှာပါ။
ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ ခွစေမျးပှဲအပွီး မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho က ပွီးခဲ့တဲ့(၂)နှဈခှဲကာလအတှငျး ရပျရျှဖို့ဒျရဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှကွေောငျ့ ဆုပေးတဲ့အနနေဲ့ ကြောနံပါတျ(၁၀)ကို ဝတျဆငျခှငျ့ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုခဲ့တယျ။
မနျယူအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျမှာ နံပါတျ(၁၀)ဝတျဆငျခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျတှရှေိခဲ့ဖူးတယျ။ မာ့ချဟုချြ Mark Hughes ၊ ဘကျခမျ Beckham ၊ ရှရငျဂမျ Sheringham ၊ နစ်စတယျရှိုငျး Ruud van Nistelrooy တို့က စလို့ နောကျဆုံး ရှနျနီ Rooney အထိပါပဲ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက အဲဒီနံပါတျကို ဆှီဒငျဝါရငျ့တိုကျစဈမှူး အီဘရာဟီမိုဗဈ Ibrahimovic ဝတျဆငျခဲ့ပမေယျ့ ထငျသလောကျ မဖွဈခဲ့ဘူး။ တခြို့နံပါတျတှကေ ထူးခွားမှုရှိသလို၊ နတျကွီးတယျလို့ ဆိုရမလားပဲ။
ဥပမာ မနျယူအသငျးမှာဆိုရငျ နံပါတျ(၇)၊ နံပါတျ(၁၀)အင်ျကြီတှကေို တျောရုံလူ ဝတျဆငျဖို့ဆိုတာ ခကျပါတယျ။ ဘကျခမျ Beckham နောကျပိုငျး စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဝတျဆငျခဲ့ပွီး နံပါတျ(၇)ဝတျဆငျခဲ့တဲ့သူတှထေဲမှာ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး ကစားသမားဖွဈခဲ့တာကိုလညျး ပရိသတျတှေ အသိဖွဈမှာပါ။ အဲဒီနောကျပိုငျး ကြောနံပါတျ(၇)က ကြိနျစာလိုဖွဈလာပွီး ဒီနံပါတျဝတျဆငျခှငျ့ ရခဲ့တဲ့ကစားသမားတှဟော ဖိအားဒဏျ မခံနိုငျလို့ အိုးလျထရကျဖို့ဒျမွကေို စှနျ့ခှာခဲ့ရတဲ့အထိ ဖွဈခဲ့ရတယျ။ ဗလငျစီယာ Valencia တဈဦးသာ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျသိလို့ အရငျနံပါတျဟောငျး (၂၅)ကို ပွနျဝတျဖို့ တောငျးဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သာဓကတှလေညျး ရှိခဲ့တယျ။
ကြောနံပါတျ(၁၀)ကတြော့ နံပါတျ(၇)ထကျ ဖိအား ပိုနညျးတယျလို့ ဆိုရမယျ။ မာ့ချဟုချြနောကျပိုငျး ဘလကျချမိုး Balckmore ဝတျတယျ၊ မအောငျမွငျဘူး။ ဘကျခမျ ဆီ ရောကျလာတယျ၊ အောငျမွငျမှုရတယျ။
အဲဒီနောကျ ရှရငျဂမျ Sheringham ၊ နစ်စတယျရှိုငျး Nistelrooy ၊ ရှနျနီ Rooney တို့ လကျထကျအထိ နံပါတျ(၁၀)ပိုငျရှငျတှကေ အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့ကွတယျ။
အခု ကြောနံပါတျ(၁၀)ကို ရပျရျှဖို့ဒျ ဝတျဆငျခှငျ့ရခဲ့ပွီ။ ရှပျရျှဖို့ဒျဆိုတာကလညျး အသကျ(၂၀)သာရှိသေးပမေယျ့ နာမညျကွီးကစားသမားတှတေောငျ မစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ သှငျးဂိုးစံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ရယူထားသူ။၂၀၁၆၊ ဖဖေျောဝါရီမှာ မဈဂြေးလနျးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂျပှဲတုနျးက စီနီယာအသငျးအတှကျ ပထမဆုံးပှဲထှကျကစားခဲ့ပွီး (၂)ဂိုးသှငျးခဲ့လို့ မနျယူအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ဥရောပပွိုငျပှဲမှာ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသှငျးတဲ့သူဖွဈခဲ့တယျ။
အာဆငျနယျနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ပရီးမီးယားလိဂျပှဲမှာလညျး (၂)ဂိုးသှငျးခဲ့တာကွောငျ့ မနျယူအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ တတိယမွောကျ အသကျအငယျဆုံးဂိုးသှငျးသူအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပွနျတယျ။ ရပျရျှဖို့ဒျရဲ့ မှတျတမျးက မရပျတနျ့ခဲ့ဘူး။ မနျစီးတီးနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမှာ ဂိုးသှငျးခဲ့တာကွောငျ့လညျး ပရီးမီးယားလိဂျခတျေ မနျခကျြစတာဒါဘီမှာ အသကျအငယျဆုံး ဂိုးသှငျးတဲ့သူဖွဈခဲ့တယျ။ အခုနောကျပိုငျး မျောရငျဟိုရဲ့ နရောမပေးမှုကွောငျ့ ပုံမှနျကစားခှငျ့ရဖို့ ရုနျးကနျလာရပမေယျ့ ပါဝငျခှငျ့ရတဲ့ပှဲတိုငျးမှာ အသငျးအပျေါ အကြိုးပွုနဆေဲပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ပဲ စစခငျြးကစားတုနျးက ကြောနံပါတျ (၃၉)၊ နောကျတော့ (၁၉) အခု နံပါတျ(၁၀)ကို မျောရငျဟိုက ယုံယုံကွညျကွညျ ပေးအပျခဲ့တာပါ။ ရပျရျှဖို့ဒျရဲ့ ခွစှေမျးအရလညျး ဒီနံပါတျနဲ့ ထိုကျတနျသူဆိုတာ ငွငျးစရာမရှိပါဘူး။ လကျရှိဘောလုံးလောကရဲ့ လူငယျကွယျပှငျ့တှထေဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈနသေူ ရပျရျှဖို့ဒျအတှကျ သူ့နောငျတျောကွီးတှလေို အောငျမွငျမှုမြိုးရယူနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျဖို့ပဲ လိုအပျပါတော့တယျ . . .